Russia De Ato Gua Sɛ Adansefo no Bible “Sɛe Nkurɔfo Adwene”
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Armenian Cebuano Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French Georgian German Greek Hungarian Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Korean Lithuanian Myanmar Norwegian Pangasinan Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Serbian (Roman) Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Thai Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Yoruba
Russia De Ato Gua Sɛ Bible “Sɛe Nkurɔfo Adwene”
August 17, 2017 no, Vyborg City Asɛnnibea no kaa sɛ Kyerɛw Kronkron​—Wiase Foforo Nkyerɛase a ɛwɔ Russia kasa mu no yɛ Bible a “ɛsɛe nkurɔfo adwene.” Kyerɛw Kronkron​—Wiase Foforo Nkyerɛase no yɛ Bible a Yehowa Adansefo akyerɛ ase kɔ kasa pii mu. * Wei ne nea edi kan koraa a ɔman bi a emufo dodow no ara kyerɛ sɛ wɔyɛ Kristofo asi gyinae abara Bible no.
April 2016 no, Vyborg City Asɛnnibea no tuu asɛm yi hyɛɛ da sɛnea ɛbɛyɛ a ‘abenfo bɛyɛ nhwehwɛmu’ wɔ Bible no mu. Wɔsan tenaa asɛm no so July 2017 awiei. Leningrad-Finlyandskiy Transport Kwaadubɔfo de too asɛnnibea no anim sɛ wɔmpaw ‘abenfo ma wɔnyɛ nhwehwɛmu’ wɔ Wiase Foforo Nkyerɛase no mu nhwɛ sɛ ɛyɛ Bible a emu nsɛm “sɛe nkurɔfo adwene” anaa. Ɔtemmufo no penee so maa no. Wotuu bere a wɔde bewie nhwehwɛmu no hyɛɛ da mpɛn pii. Bere a wowiei no, wɔde nea wohui no kɔmaa asɛnnibea no wɔ June 22, 2017. Bere bi asɛnnibea no paw ebinom a wɔkyerɛ sɛ wɔyɛ abenfo ma wɔhwehwɛɛ Adansefo no nhoma ahorow mu. Nea wɔde too gua ne sɛ Adansefo nhoma no “sɛe nkurɔfo adwene.” Wɔn a wɔhwehwɛɛ Bible no mu nso, saa ara na wɔkae.
“Abenfo Nhwehwɛmu” No Gyina Nyamesomfo Bi Nkyerɛkyerɛ So, Ennyina Nokwasɛm So
Russiafo wɔ Mmara Bi a Wɔde Ko Tia Amammɔesɛm. Ɛka sɛ, obiara nni hokwan sɛ ɔka sɛ nhoma kronkron te sɛ Bible sɛe nkurɔfo adwene. Nea ɛbɛyɛ na mmara no nwe wɔn a wɔyɛɛ nhwehwɛmu no, wotumi sii wɔn bo kaa sɛ Wiase Foforo Nkyerɛase no “nyɛ Bible.” Yaroslav Sivulskiy yɛ European Association of Jehovah’s Christian Witnesses no nanmusini. Ɔkaa sɛ: “Mpɛn pii na Russia aban no akyea mmara a ɛfa amammɔesɛm ho bere a wɔredi asɛm a ɛfa yɛn som ho no. Nanso seesei de, wɔpɛ sɛ wɔdan wɔn akyi kyerɛ mmara no koraa. Nea wɔrekyerɛ ne sɛ Wiase Foforo Nkyerɛase no nyɛ Bible, sɛnea ɛbɛyɛ a wobetumi aka sɛ ɛyɛ nhoma a emu nsɛm sɛe nkurɔfo adwene. Nea Russia aban reyɛ yi kyerɛ sɛ wawe ahinam so sɛ ɛbɛsɛe Yehowa Adansefo din.”
“Obiara ntumi nka sɛ Bible, Koran, Tanakh ne Kangyur yɛ nhoma a ɛsɛe nkurɔfo adwene. Saa ara na obiara ntumi nka sɛ saa nhoma yi mu nsɛm a wɔafa de aka asɛm yɛ biribi a ɛsɛe nkurɔfo adwene.”​—Russia Man No Mmara a Ɛko Tia Amammɔesɛm Mu Nsakrae, Mmara a Ɛto So 3.1: Sɛ wɔde Russia Man no mmara a ɛko tia amammɔesɛm no redi dwuma wɔ nsɛm a ɛfa nyamesom ho a, ɛsɛ sɛ wosusuw ho yiye. (Amendment to the Russian Federation Law on Counteracting Extremist Activity, Article 3.1: Special considerations when applying to religious texts legislation of the Russian Federation on counteracting extremist activity).
Ade titiriw a nhwehwɛmufo no gyinaa so kaa sɛ Wiase Foforo Nkyerɛase no “nyɛ Bible” ne sɛ, ɛkyerɛ Tetragrammaton * a egyina hɔ ma Onyankopɔn din no ase sɛ “Yehowa.” Mmaranimfo a wogyinaa Yehowa Adansefo ananmu no de adanse mae de bɔɔ saa asɛm no gui. Mmaranimfo no de Bible nkyerɛase foforo du a ɛwɔ Russia kasa mu a edin Yehowa wom baa asɛnnibea hɔ. Afei nso, wɔde anwensɛm a Tsvetaeva ne Pushkin kyerɛwee, ne nhoma a Kuprin, Goncharov, ne Dostoyevsky kyerɛwee ne tete Russia nhoma afoforo mu nsɛm bedii adanse. Wɔsan twee adwene sii Makarios Bible a ɛwɔ Russia kasa mu a wɔkyerɛw no afeha a ɛto so 19 mu no so. Ortodɔksfo na wɔkyerɛɛ ase, na Yehowa din pue wom bɛboro mpɛn 3,500.
Afei nso, asɛnnibea no penee so sɛ adanse a ɛkyerɛ sɛ Wiase Foforo Nkyerɛase no nso yɛ Bible no, abenfo mmienu mmɛkyerɛkyerɛ mu. Bere a wɔredi asɛm no August 9 no, ɔbenfo Anatoliy Baranov * a wobu no pa ara a ɔwɔ kasa ahorow ho nimdeɛ no kaa sɛ, ɛwom sɛ nsonsonoe wɔ nsɛmfua a ɛwɔ Wiase Foforo Nkyerɛase no ne nsɛmfua a ɛwɔ synodal Bible no mu de, nanso wei nkyerɛ sɛ Wiase Foforo Nkyerɛase no nyɛ Bible. Ɛnyɛ nwonwa sɛ yebehu sɛ nsonsonoe a ɛte saa wɔ nkyerɛase ahorow mu. Sɛ yɛpɛ sɛ yehu sɛ Bible nkyerɛase bi a wɔayɛ nnansa yi di mũ a, ɛsɛ sɛ yɛde toto kasa a wɔde kyerɛw Bible no (Hebri, Aram, anaa Hela) ho, sen sɛ yɛde bɛtoto nkyerɛase dedaw bi a ɛwɔ kasa koro no ara mu ho.
Bere a wɔredi asɛm no August 16 no, Mikhail Odintsov * a ɔyɛ nyamesom ho nimdefo no kaa sɛ, nsonsonoe titiriw biara nni Wiase Foforo Nkyerɛase no ne nkyerɛase afoforo a ɛwɔ Russia kasa mu no mu, na wogye tom sɛ Wiase Foforo Nkyerɛase no yɛ Bible a edi mũ. Owura Odintsov sii so dua sɛ Russia nsɛm asekyerɛfo foforo de Onyankopɔn din “Yehowa” adi dwuma. Wɔn mu bi ne wɔn a wɔkyerɛɛ synodal Bible no ase no. Onyankopɔn din no pue wom bɛyɛ mpɛn du.
Abenfo a wɔyɛɛ nhwehwɛmu no kyerɛe nso sɛ, Wiase Foforo Nkyerɛase no nyɛ Bible efisɛ ɛnka no pefee sɛ ɛyɛ Bible. Nanso, Owura Odintsov kaa sɛ, nsɛm te sɛ “Kyerɛwnsɛm” ne “Kyerɛw Kronkron” a Wiase Foforo Nkyerɛase no de di dwuma no yɛ nsɛm a ɛfata pa ara a egyina hɔ ma Bible.
Wiase Foforo Nkyerɛase Ho Asɛm a Wodii No Yɛ Atɛnkyea a Wɔabu Yehowa Adansefo
Gyinae a Vyborg City Asɛnnibea no sii no, wonnya mfa nyɛɛ adwuma. Enti wɔmfaa Wiase Foforo Nkyerɛase no nkaa nhoma ahorow a atumfoɔ no kyerɛ sɛ ɛsɛe nkurɔfo adwene no ho. Adansefo no de asɛm no bɛkɔ akɔdan Leningrad Ɔmantam Asɛnnibea no nnafua 30 ntam.
Gyinae a Russia Aban no asi sɛ ɔbɛbara Bible a Yehowa Adansefo de di dwuma wɔ wɔn som mu no yɛ atɛnkyea foforo a wɔabu Yehowa Adansefo nnansa yi ara. Bɛboro mfe du ni na aban no atu n’ani asi Yehowa Adansefo so retaa wɔn. Ɔtaa a aban no de ba Yehowa Adansefo so no mu yɛɛ den pa ara wɔ July 17. Ná Russia Asɛnnibea Kunini no adi kan abu atɛn sɛ wɔbɛbara Yehowa Adansefo som no wɔ Russia. Wɔ July 17 no, wɔtenaa asɛm no so bio, na Asɛnnibea Kunini no kae bio sɛ ogyina nea ogyina; ɔnsesaa n’ano. Gyinae a Vyborg City Asɛnnibea no asi nnansa yi ara no kyerɛ sɛ, Russia da so ara de ɔtaa a enni nnyinaso reba Adansefo no so.
Nkyerɛase No Ho Nokwasɛm
“Abenfo nhwehwɛmu” a wodii kan yɛe a wogyinaa so sɛ wɔremma Adansefo no nkra Wiase Foforo Nkyerɛase mma Russia no kaa saa asɛm yi: “Sɛ obi betumi akyerɛkyerɛ kyerɛw kronkron no mu yiye a, ɛsɛ sɛ onii no nya Atetesɛm Kronkron no ho nimdeɛ a edi mũ. Sɛ Ortodɔks Asɔre no rekyerɛkyerɛ Onyankopɔn Asɛm mu a, wogyina nnyinasosɛm a edi mũ so na wɔyɛ saa: Ɛsɛ sɛ obi nya Atetesɛm Kronkron no ho nimdeɛ ansa na watumi ate Kyerɛw Kronkron no ase.” Saa asɛm yi kyerɛ sɛ, sɛ obi betumi akyerɛ Kyerɛw Kronkron Bible no ase a, ehia pa ara sɛ onya asɔre no atetesɛm ho nimdeɛ.
J. D. BeDuhn yɛ Nyamesom Ho Ɔbenfo wɔ Northern Arizona Suapɔn mu. Ɔde Wiase Foforo Nkyerɛase no (NW) totoo Bible nkyerɛase nwɔtwe a wɔayɛ no nnansa yi ho, na ɔkaa sɛ “NW no di mũ sen nkyerɛase a aka no nyinaa.” Ɔkaa nea enti a ogye di sɛ Yehowa Adansefo de adwempa na ɛyɛɛ wɔn nkyerɛase no. Ɔkyerɛɛ mu sɛ, Yehowa Adansefo kuw no “bɔɔ mmɔden sɛ wɔbɛsan de Kristosom a na ɛwɔ hɔ fi tete no aba.” Ɔkaa sɛ wei maa Yehowa Adansefo de adwempa yɛɛ Bible mfitiase nkyerɛwee no mu nhwehwɛmu, na na wonnii kan mfaa adwene biara nhyɛɛ wɔn tirim; na mmom nea wogye di ne nea wɔyɛ nyinaa, wɔde gyina nea wohui wɔ mfitiase nkyerɛwee no mu so. Akasatiafo bi bɛka sɛ, sɛ obi fa saa kwan yi so yɛ nhwehwɛmu a, nea ebefi mu aba no renyɛ papa. Protestantfo nkyerɛase pii mu no, gyidi a na wɔwɔ dedaw na wogyinaa so kyerɛɛ Bible no ase, nanso Adansefo no de ɛnyɛ gyidi bi a wɔwɔ so na wogyina kyerɛɛ Bible no ase.​—Hwɛ Truth in Translation: Accuracy and Bias in English Translations of the New Testament, a Jason David BeDuhn kyerɛwee, kratafa 161-165.
Nea enti a Yehowa Adansefo tintim Wiase Foforo Nkyerɛase no
Emu nyɛ den, na ɛyɛ nkyerɛase a ɛwɔ kasa a wɔka no nnɛ mu; wɔkyerɛɛ ase fii Hebri, Aram, ne Hela kasa mu
Emu nsɛm yɛ pɛpɛɛpɛ, na wogyinaa Bible nkyerɛase ho nimdeɛ a wɔanya no nnansa yi so na ɛyɛe
Wontwaa bo biara ntoo so, na ɛwɔ kasa bɛboro 120 mu; wubetumi anya nea wɔatintim, nea wɔbɔ tie, nea ɛwɔ mum kasa video so, ne nea ɛwɔ jw.org
Kyerɛw Kronkron​—Wiase Foforo Nkyerɛase Ho Asɛm a Russia De Kɔɔ Kɔɔto No​—Sɛnea Nsɛm No Sisii
Vyborg City Asɛnnibea no gyee sobo a kwaadubɔfo no bɔe sɛ Wiase Foforo Nkyerɛase no yɛ “nhoma a ɛsɛe nkurɔfo adwene” no toom
Vyborg City Asɛnnibea no san tenaa Wiase Foforo Nkyerɛase ho nhwehwɛmu a wɔreyɛ ho asɛm no so bio
Asoɛe a Ɛhwɛ Asetena ne Amammerɛ So (Center of Sociocultural Expert Studies) no sii gyinae sɛ Wiase Foforo Nkyerɛase no “nyɛ Bible,” na ɛyɛ nhoma a “ɛsɛe nkurɔfo adwene”
Russia Man No Asɛnnibea Kunini no gyee gyinae a asɛnnibea ketewa sii no toom. July 2015 na asɛnnibea ketewa no sii gyinae sɛ, Adansefo no Bible a wɔde nsa too so no, wonnye ne nyinaa
Vyborg City Asɛnnibea no hyɛe sɛ Asoɛe a Ɛhwɛ Asetena ne Amammerɛ So no nhwɛ sɛ Wiase Foforo Nkyerɛase no mu nsɛm “sɛe nkurɔfo adwene” anaa
Kwaadubɔfo no kaa sɛ Vyborg City Asɛnnibea no mmu atɛn sɛ Wiase Foforo Nkyerɛase no yɛ nhoma a “ɛsɛe nkurɔfo adwene”; asɛnnibea no gyinaa kwaadubɔfo no asɛm no so fii ase dii asɛm no
Adansefo no kaa sɛ etia mmara sɛ wɔregyigye wɔn Bible. Nanso Asɛnnibea a Esiesie Asɛm (Arbitration Court) a ɛwɔ St. Petersburg ne Leningrad Ɔmantam mu no dii asɛm no tiaa Adansefo no
Bible 2,016 a wɔde baa ɔman no mu July 13 no, Vyborg aban mpanyimfo (Customs officials) a wɔhwɛ nneɛma a ɛba ɔman no mu hyɛɛ mmara sɛ wonnye ne nyinaa; wɔkyerɛe sɛ ebia na nsɛm a ɛwom no “sɛe nkurɔfo adwene”
Vyborg aban mpanyimfo gyee Bible mmiɛnsa sɛ wɔde rekɔma ‘abenfo ma wɔde ayɛ nhwehwɛmu’
Wiase Foforo Nkyerɛase a ɛwɔ Russia kasa mu a na wɔde reba ɔman no mu no, Vyborg aban mpanyimfo no de wɔn nsa too so
^ nky. 2 Wɔatintim Wiase Foforo Nkyerɛase no nyinaa anaa ne fã bi wɔ kasa bɛboro 120 mu. Dodow a wɔakyekyɛ boro ɔpepem 200.
^ nky. 6 Tetragrammaton yɛ Onyankopɔn din a ɛwɔ Hebri mu, יהוה, wɔkyerɛ ase YHWH anaa JHVH. Epue bɛyɛ mpɛn 7,000 wɔ Hebri Kyerɛwnsɛm no mu (nea wɔtaa frɛ no Apam Dedaw no).
^ nky. 7 Ɔbenfo Baranov ka abenfo kuw a wɔhwehwɛ kasa mu wɔ Russia asoɛe a ɛyɛ nhwehwɛmu ma asɛnnibea no ho; ɔno ara na ɔsan yɛ asoɛe a ɛkyerɛ Russia kasa nsɛmfua ase wɔ Russia nhomasua asoɛe no titenani. (Expert Committee for Certifying Expert Linguists at the Russian Center for Judicial Expert Studies and the head of the Department of Experimental Lexicography of the Institute of the Russian Language of the Russian Academy of Sciences.)
^ nky. 8 Odintsov yɛ ɔbenfo kunini, na ɔka Russia man no asetena ne amanyɔsɛm ho nsɛm akorae bagua no ho; ɔsan yɛ nyamesom ho nhwehwɛmufo bagua no titenani. (Academic Council of the Russian State Archive of Socio-Political History and the president of the Association of Researchers of Religion)